Garowe oo kala xidhan & Deegaano hoostaga oo khasaare xoogan uu gaadhay
BOSASO(P-TIMES)- Wararka haatan aan ka helayno magaalada Garowe ee caasimada Puntland ayaa sheegaya in roobkii xalay qabsaday magaaladaasi uu weli ka da’ayo gudaha Garowe, kaas oo sababay kala xidhnaansho xoogan.
Goobaha ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee magaalada ayaa saamaynta ugu xoogani ay gaadhay, waxaana inta badan hakad galay goobaha ganacsiga, waxbarashada iyo goobaha shaqada ee magaalada Garowe.
Qaar kamid ah dadka deegaanka oo la hadlay Puntlandtimes.com ayaa sheegay in qabow xad dhaaf iyo dhibicda raxmaadka eebe oo is kaashaaday ay go’doon galiyeen magaalada isla markaasna badi shacabku aysan maanta banaanka u bixin sababo la xidhiidha roobka oo da’ayey muddo saacado xidhiidh ah.
Qaybaha kala duwan ee magaalada ayaa lagu arkayaa biyo xoogan oo rogmanaya, waxaana maanta fasax ku jira shaqaalaha dowladda halka goobaha waxbarashada ay xidhan yihiin.
Khasaaraha ka dhashay roobkani oo aan saas u weynayn dhanka Garowe ayaa la sheegay in khasaaraha ugu badan uu ku habsaday deegaanada hoostaga magaalada Garowe, iyadoona deegaanada qaarkood guud ahaantoodba bilaa isgaadhsiin yihiin.
Puntlandtimes.com oo xidhiidho kala duwan la samaysay dadka deegaanka ayaa ilaa hada loo xaqiijiyey khasaare hantiyeed walowse uu jiro khasaare nafeed oo soo gaadhay dadka reer guuraaga ah ee ku dhaqanka gobolka Nugaal.
Deegaanka oo hoostaga degmada Garowe Qundheed ayaa waxaa ku dumay 9 guri halka deegaanka Baq Baq isna uu roobku la tagay gaadhi, waxaana sidoo kale lasoo sheegayaa in deegaanka Garmaal ee gobolka Nugaal ay daadadka oo aad u xoogan kala tageen 6 qosy xoolo ay lahaayeen halka Ilmo yarna qabowga oo aad u daran isna uu naf waayey.
Dhanka degmada Eyl ee gobolka Nugaal ayaa iyaduna bilaa isgaadhsiin ah maanta, kadib markii Ateenkii shirkadda Golis oo dhacday isna uu dumiyey guryo ku yaala deegaankaasi.
Deegaanada ay gaadhi jirtay Ateenada isgaadhsiinta Golis ee degmada Eyl ayaa iyaguna bilaa isgaadhsiin ah welina lama oga khasaaraha dhabta ah ee ay sababeen roobabkii xalay ilaa saaka ka da’ayey gobolka Nugaal.
Warsidaha Puntlandtimes.com kala soco wixii kusoo kordha wararkaasi